Windows 8 Editions များ အကြောင်း | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Windows 8 Editions များ အကြောင်း
Posted on October 31, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	Microsoft Windows 8 မှာဆိုရင် ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက် Editions (4) မျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Windows 8 Editions (4) မျိုး
(1) Windows 8(2) Windows 8 Pro(3) Windows 8 Enterprise(4) Windows 8 RT
ပထမဆုံး Windows 8 ဆိုတဲ့ Basics Edition ကတော့ x86 (32bits) နဲ့ x64(64bits) architecture အတွက် အခြေခံကျတဲ့ အက်ဒီရှင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Windows 8 မှာ အခြေခံကျတဲ့ အသစ်အသစ်သော အရာတွေ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာတွေ ပါလာသလဲ ဆိုတော့ start screen with semantic zoom, live tiles, Windows Store, Internet Explorer 10, connected standby, Microsoft account integration, the Windows desktop စသည်ဖြင့် ပါဝင်လာပါတယ်။
Windows 8 Pro ဆိုရင်တော့ Windows7Professional နဲ့ Ultimate Editions နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ပါဝင်တဲ့ အရာတွေ အကုန်လုံး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ Editions နှစ်မျိုးစလုံးကို ကျော်လွန်ပြီး အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။ Windows 8 Pro ကို နည်းပညာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေနဲ့ Business Users တွေအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ no (1) က Windows 8 မှာ ပါဝင်တဲ့ Feature တွေအကုန်လုံး ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် aditional Features တွေအနေနဲ့ကတော့ Remote Desktop server, the ability to participate inaWindows Server domain, Encrypting File System, Hyper-V, and Virtual Hard Disk Booting, Group Policy , BitLocker နဲ့ BitLocker To Go စသည်ဖြင့် ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
Windows 8 enterprise မှာဆိုရင်တော့ windows 8 နဲ့ windows 8 pro ရဲ့ feature တွေအပြင် တခြား IT Organization တွေကို အထောက်အကူပြုစေမဲ့ feature တွေလဲ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Edition ဟာ Software Customer တွေနဲ့ MSDN (Microsoft Developer Network) တွေအတွက် အထူး သင့်တော်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Windows RT ဆိုတာကလဲ ARM နည်းပညာကို အခြေခံတဲ့ Tablet လို Device မျိုးတွေအတွက်သာ သင့်လျှော်ပါတယ်။ ARM ဆိုတာက microsoft က windows 8 ကိုစပြီး introduction လုပ်တဲ့ အခါမှာ window runtime development အတွက် အမည်ပေးခဲ့တာပါ။ ARM ရဲ့ အသေးစိတ်ကို လေ့လာကြည့်ချင်တဲ့ ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်မှာ သွားပြီး လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ နောက်တခု အနေနဲ့ Windows RT မှာဆိုရင် device encryption စွမ်းဆောင်ရည်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ serveral business-focused features တွေဖြစ်တဲ့ group policy တို့လိုမျိုး feature တွေလဲ ပါဝင်လာပါတယ်။ centrilized network တွေအတွက်တော့ domain ကို support မလုပ်ဖူးဗျ။
Windows 8 ရဲ့ အားလုံးသော အက်ဒီးရှင်းတွေမှာ ဘာသာစကား တော်တော်စုံစုံလင်လင်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိ Windows7အသုံးပြုနေတဲ့ သူတွေအတွက် windows 8 ကို update လုပ်ပြီး အသုံးပြုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Windows7x86 (32bits) version ကို အသုံးပြုထားတဲ့ user တွေ အနေနဲ့ windows 8 x86 (32bits) ကိုသာ Update လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပဲ windows7x64 (64bits) version ကို အသုံးပြုထားတဲ့ user တွေအတွက်လဲ windows 8 x64 (64bits) version ကိုသာလျှင် update လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Windows RT ကတော့ ARM Architecture (windows7တွင် support မလုပ်ပါ) အတွက်သာ သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Windows7ကနေ windows 8 ကို update လုပ်တာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ အောက်မှာ ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ ပုံကို လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
This entry was posted in Windows 8 နှင့်ဆိုင်သော. Bookmark the permalink.
← twitter မှာအကောင့် ဖွင့် ပြီး tweets ကျမယ်	The wolverine 2013 ရုပ်ရှင်အကြည် →